अ‍ोठले दर्शाउँछ मानिसको स्वभाव जनबोली न्यूज नेटवर्क प्रा. लि
सोमबार ५ असोज, २०७७ | Monday, September 21st, 2020
अ‍ोठले दर्शाउँछ मानिसको स्वभाव
शुक्रबार १३ चैत, २०७१
मानिसको शरीरका विभिन्न अंगहरु मध्ये ओठ पनि एक महत्वपूर्ण अंग हो, जसलाई सुन्दरताको प्रतिक समेत मानिन्छ । प्राय केटीहरुको ओठले उनीहरुको सुन्दरता निखार्न मद्दत गर्दछ । त्यति मात्र नभएर ज्योतिष शास्त्र अनुसार मानिसको ब्यक्तित्व उनीहरुको ओंठ हेरेर पनि थाहा पाउन सकिन्छ । मुस्कान सबैभन्दा राम्रो अभिवादन हो तर यो मुस्कानको समयमा ओंठको अध्यन गर्न सकियो भने उनीहरुको स्वभाव समेत थाहा पाउन सकिने ज्योतिष शास्त्रीहरुको भनाइ छ ।
आउनुस् जानौं कस्तो ओंठ हुने ब्यक्तिको स्वभाव कस्तो हुन्छ भनेर ।
जुन् ब्यक्तिको ओंठ अत्याधिक मोटा हुन्छन् त्यस्ता ब्यक्ति क्रोधी स्वभावका हुन्छन् । यस्ता ब्यक्तिलाई साना साना कुरामा पनि रिस उठ्छ र उनीहरुको रिसले कुनै कुनै समयमा तै समस्या नै खडा गरिदिन्छ । यस्ता ब्यक्ति भावनाप्रदान र जिद्धी हुन्छन्
रातो रंगका चिल्ला र कलात्मक ओंठ हुने ब्यक्ति देख्दा सुन्दर त हुन्छन् नै कला प्रिय र मृदुल स्वभावका हुन्छन् । यस्ता ब्यक्तिले घर समाजमा मान सम्मान पाउँछन् र जीवनमा उपलब्धी पनि हासिल गर्छन् ।
गुलावी रंगका ओंठ हुने ब्यक्ति ब्यवहारमा कुशल उदार र बुद्धिमान हुन्छन् । यस्ता ब्यक्तिले आफ्नो क्षमताको बलमा सबैलाई मोहित तुल्याउँछन् । यिनीहरुका मित्र पनि धेरै हुन्छन् ।
कतिपय ब्यक्तिका ओंठ अलि उठेका हुन्छन् । यसरी ओठ उठेका ब्यक्तिहरु डरपोक हुन्छन् । यिनीहरुलाई कठिन परिस्थिती सम्हाल्न निक्कै कठिन हुन्छ ।
तलपट्टी धसिएका ओठः
कतिपयका ओंठ तलपट्टी धसिएका हुन्छन् । यसरी तल पट्टी फर्केका ओंठ हुनेहरुको स्वभाव रहस्यमयी हुन्छ । यनीहरुको मनमा के चलिरहेको हुन्छ बुझ्न सँधै कठिन हुन्छ । यिनीहरु निक्कै राम्रा योजनाकार हुन्छन् र योजना भने कसैलाई पनि भन्दैनन् ।
ठूला ओंठ हुने ब्यक्ति शौखिन हुन्छन् । उनीहरुलाई विभिन्न प्रकारका खाना खाने शोख हुन्छ । छिट्टै रिसाउने यस्ता ब्यक्ति छिट्टै सामान्य अवस्थामा पनि आइहाल्छन् ।
कतिपय ब्यक्तिको ओंठ निक्को पातला हुन्छन् । पातला र रंगविहिन ओंठ हुनेहरु अलि बढी आडम्बरी स्वभावका हुन्छन् । यद्यपी उनीहरु अन्य ब्यक्तिमा आफ्नो प्रभाव कायम राख्न नि सफल हुन्छन् ।
कतिपयको ओंठमा कोठी हुन्छ । यस्ता ब्यक्ति कामुक स्वभावका हुन्छन् र उनीहरुको मनमा हरदम कामुक विचार चलिरहेका हुन्छन् । उनीहरुमा विपरित लिङ्गीलाई प्रभावित गर्ने क्षमता पनि प्रवल हुन्छ । ओठको तल्लोभागमा कोठी हुनेहरुले कठिन परीश्रम गर्छन् किन भने यिनीहरुलाई सहजै आम्दानी हुन सक्दैन ।
९ जना पुरुष र १ जना महिला मृत अवस्थामा फेला
सोमबार ५ असोज, २०७७
दुर्घटनामा ४ जनाको मृत्यु
अनसनको ८ औं दिन डा. केसीको अवस्था जटिल
एमसीसी कार्यान्वयन हुन्छ, भारत वार्ता नजिक छ : प्रदिप ज्ञवाली
यी हुन् शक्तिशाली राशिहरु हत्तपत्त केही कुरामा मान्दैनन् हार !
पैसाका लागि श्रीमानले शा’री’रिक सु’खभो’गका लागि साथीलाई श्रीमती सु’म्पि’एपछि जे भयो…
पाँचौ छोरी जन्मिएपछिको ग’र्भमा पत्नीमाथी श्रीमानले जे गरे थाहा पाउँने सबै चकित !
भगवान शिवको उपासना गर्दा गर्न नहुने १५ गल्ती
आन्तरिक उडानबारे सरकारले गरेको यस्तो निर्णय आजदेखि लागु हुने
सोमबार गर्नुहोस् यी पाँच काम, जीवनमा आउँनेछ चमत्कारीक लाभ
चन्द्रमा तुला राशिमा गोचर हुँदा यी राशिमा यस्तो प्रभाव : राशिफल/२०७७ असोज ५ गते सोमबार
इन्फिनिक्सले उत्कृष्ट फोटोग्राफी र वीडियोग्राफी क्षमता भएको Note7Series 6/128 GB नेपालमा भित्रायो
महामारीमा मिडियाको भूमिकाः सीमित श्रोतका बाबजुद पनि खबरदारीमा उत्रिए सञ्चारमाध्यम
एनआरएनए हेल्थ सम्मेलनको निस्कर्ष : चेतनाको अभावमा बढ्दै महिलामा स्वास्थ्य समस्या
नवलपरासी भयो सबैको आँशु आउँने घटना
बन्दना राणा राष्ट्रसङ्घ जनसङ्ख्या कोषको उच्चस्तरीय आयोगमा मनोनित
शेरधन राईसँग जोडे कुनै समाचार नबनाउँन बालिकाको मिडियालाई अनुरोध
आईतबार ४ असोज, २०७७
कोरोनामाथी चीनमा शुरु भयो अर्को भयानक रोग, एकै पटक ३ हजार संक्रमित
धनी बन्ने यी ३ तरिका आजै फलो गर्नुहोस्
सरकारका यस्ता कार्यको खबरदारी गर्न सांसदलाई काँग्रेसको निर्देशन
[email protected] / [email protected] / [email protected]